Lakkoofsota / Dhangii
Baafatta haalqara irrantoo tarjaaf, gabattee kussuu deetaa kessaa banii cancala Dhangii Tarjaa - Dhangii fili
Cancala (Galmeelee taattoo )Dhangii - Siqqee - Siqqee Y Lakkoofsoota fili
Akkuma qaaqni Dhangii Lakkofsaa galmelee barruu kessattii gabattewwaniif ta'uuttii: Dhangii - Dhangii Lakkoofsaa filii, yookin cancala Saaguu -Dirrewwan - Kabiroo - Jijjiramoota filii, akkasuumas Dhangii tarree dhangii keessaa fili.
Dhangiin mahaallaqa durtii man'eedhaa qinda'ana murtaa'aa sirna dalaga keetiin murtaa'a.
Akaakuu mahaallaqaa sanduuqa tarressu
Qindaa'inni afaani akka ibsutti barriifi dhangiiwwan mahaallaqaa eeggamaniin,sirumattuu yeroo galmeen sirna dalagaa keessaa baname kan durtii qindaa'ina affan adda addaa fayyadamu.
Dirqaalawwan dhangii filatameef adda baasi.
Lakkoofsota hi'entaa diimaa keessaa
Gargareessaa kumaatamaa gargaarami
Title is: Lakkoofsota / Dhangii